‘Suffering’ German Economy Dodges Recession in Third Quarter | Myanmar Business Today
Home Business International ‘Suffering’ German Economy Dodges Recession in Third Quarter
The German flag is pictured at the Reichstag building during exploratory talks about forminganew coalition government in Berlin, Germany, November 7, 2017.
Michael Nienaber and Rene Wagner /(REUTERS)
The German economy escapedarecession in the third quarter as consumers, state spending and construction drovea0.1% quarterly expansion, defying expectations of another contraction in Europe’s largest economy, preliminary data showed on Thursday.
On an annual basis, gross domestic product expanded 0.5% from July through September aftera0.3% expansion in the previous three months, seasonally adjusted figures from the Federal Statistics Office showed.
Germany’s manufacturers, whose exports have beenabedrock of the country’s economic strength for decades, are struggling with weaker foreign demand, tariff disputes sparked by U.S. President Donald Trump’s ‘America First’ policies and business uncertainty linked to Britain’s decision to leave the European Union.
Alexander Krueger from Bankhaus Lampe said that he expected meagre growth rates in the coming quarters as the trade outlook remained clouded. “The economic slowdown in China, the global trade dispute and the Brexit chaos are all pointing toaweaker economic momentum,” Krueger said.
But it revised up the growth figures for the first quarter toa0.5% expansion froma0.4% increase reported earlier.
ဥရောပ၏ စီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံးဖြစ်သော ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသူများ၊ အစိုးရ၏ သုံးစွဲမှုများ၊ ဆောက်လုပ်‌ရေးများက သုံးလပတ်ကာလ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာ ၀ဒသမ၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သောကြောင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် တတိယသုံးလပတ်ကာလတွင် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှ ပြန်တက်လာခဲ့သည်။
နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှုတွင်တော့ ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP သည် ၀ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။
“ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး မရေရာမှုတွေကြောင့် ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ မော်တော်ယာဥ်ကဏ္ဍဟာလည်း ပုံမှန်အတိုင်း မလည်ပတ်တော့ဘူး’’လို့ သူက ပြောတယ်။
နိုင်ငံစီးပွား‌ရေးအင်အားကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အထောက်အပံ ဖြစ်စေခဲ့သည့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှာ ပြည်ပဝယ်လိုအားနည်းပါးနေခြင်း၊ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏ America First မူဝါဒများကြောင့် ဖြစ်ပေါလာသည့် သွင်းကုန်အခွန်အငြင်းပွားမှုများ၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ နှုတ်ထွက်ရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆက်နွှယ်ပြီးပေါ်ပေါက်နေသော စီးပွားရေးမရေရာမှုများကြောင့် အခက်ကြုံနေရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါဆုံးသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မော်တော်ယာဥ်ကဏ္ဍသည်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေသည့် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ခဲ့သည့် ကိစ္စအပြီးတွင် ပိုမိုတင်းကြပ်သော စည်းမျဥ်းဥပဒေများ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် အခက်အခဲကြုံနေသကဲ့သို့ လောင်ဆာဆီသုံး မော်တော်ယာဥ်များမှ လျှပ်စစ်ကားများပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ ‌ဘတ်ဂျက်သုံးဆွဲမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးများက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို တွန်းတင်ခဲ့သကဲ့သို့ ဇူလို်ငလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ပုဂ္ဂလိက သုံးစွဲမှုများလည်း တက်လာခဲ့ကြောင်း ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဌာနကဆိုသည်။
အဆိုပါ သုံးလပတ်ကာလအတွင်းတွင် နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်များ တက်လာခဲ့ပြီး သွင်းကုန်များကျဆင်းနေခဲ့သောကြောင့် ကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းသည့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအပေါ် ကောင်းသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟု အဆိုပါ ဌာနက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယသုံးလပတ်အတွက် GDP တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်း ယခင်သုံးလပတ်ကထက် သုည ဒသမ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည့်ဟု ပြင်ဆင် ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
SOURCEMichael Nienaber and Rene Wagner /(REUTERS)
Previous articleSingapore Fines UBS $8 Mln Over Deceptive Bond Trades
Next articleGerman Automation Talent Powers Musk’s Battery Move to Europe